२० वर्षिया सम्झनाले नारायणी नदीमा हामफालिन् ! – ताजा समाचार
२० वर्षिया सम्झनाले नारायणी नदीमा हामफालिन् !
चितवन, ११ साउन । नारायणी नदीमा हामफालेर एक युवती बेपत्ता भएकी छन् । बेपत्ता हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–८ सल्लेनी बस्ने २० वर्षीया सम्झना गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ देवघाटबाट गुरुङ नारायणी नदीमा हामफालेकी हुन् । उनी आज दिउँसो ३ः४५ बजे नदीमा हामफालेको प्रहरीले जनाएको छ । नदीमा हामफालेकी गुरुङको खोजीकार्य जारी रहेको छ ।
केही समयअगाडी कविता सापकोटा नाम गरेकी एक युवतीले पनि नारायणी नदीमा हामफालेकी थिइन् । पढ्नुहोस यस्तो थियो समाचार
बुटवल– शुक्रवार साँझ दाजुसँगै चढेको स्कुटीबाट ओर्लिएर नारायणघाटको पुलबाट हाम्फालेर नारायणी नदिमा बेपत्ता भएकी चितवन घर भएकी २१ वर्षीया कविता सापकोटाले हाम्फाल्नुको कारण रहश्यमय बनेको छ । उनको माइती घर कन्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिका– १८ खरकट्टी हो । कविताको विवाह गत फागुन–१७ गते चितवनको राप्ती नगरपालिका–६, वीरेन्द्रनगरका २९ वर्षीय पवन सापकोटासँग भएको थियो ।
उनी पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–३ दलदले भाग्यपुरीस्थित मावली घरबाट चितवनको वीरेन्द्रनगरस्थित आफ्नो घरमा दाजु हरि बसेलसँग स्कुटीमा चढेर जाँदै थिइन् । दाजु बसेलले भने– ‘एक्कासी ओर्लिएर हाम फालिन् । के कारणले हाम फालिन् भन्ने कुरै बुझ्न सकिएन ।’ दलदलेस्थित मामा रेशम सापकोटाको घरमा आफु त्यसैदिन विहान आएको र साँझपख बहिनीलाई चितवनस्थित घरमा छाड्न हिडेको दाजु बसेलले बताए । ‘गाडी जाम भएको बेला करिब पौने पाँच बजेको समयमा उनी हाम फालेकी हुन्,’ दाजु बसेलले भने, ‘त्यसअघि कुनै निराशाका कुरा पनि गरेकी थिईनन् । अब उतै घर तिरै गएर पढ्ने हो भन्दै थिइन्, अरु केहि कुरा गरेकी थिईनन् ।’